Qatar oo sheegtey ineysan ka joojineyn gaaska dowladaha khaliijka - Jazeera FM
Qatar oo sheegtey ineysan ka joojineyn gaaska dowladaha khaliijka
Madaxda sare ee dowlada Qatar ayaa iclaamiyey ineysan cunaqabteyn xagga gaaska ay u dhoofiso dowladaha imaaraadka iyo Oman aysan ka joojineyn iyadoo aar-gudasho uga dhigeyso waxa haatan lagu hayoee gardarrada cad.
Go’aankan ayaa madaxda Qatar qaateen kadib markii dowlada Qatar laga xayyirey isu socodka ganacsi ee cirka, dhulka iyo badda.
Dowlada Qatar waxa ay gaaska soo saarto u dhoofisaa dowlada imiaaraadka iyo Oman iyadoo u marsiiso tuubo dheer oo dhererkeedu yahey 400 oo kilometer, tuubadan dheer ayaa tagta Abu Dhabi kadibna sii quudisa dalka Oman.
Qatar waxa ay ku fadhidaa keydka gaaska ugu badan adduunka, hadey cunaqabateyn ku soo rogto imaaraadka waxa ay noqoneysaa in tamarta isticmaalka ee gaaska uu gabi ahaanba khadka ka baxo, kuna adkaaneyso iney baddal kale helaan.
Ugu dambeyn waxa ay dowlada Qatar tiri hadii xurgufka siyaasadeed uu sii xoogeysto una ekaado mid lagu wiiqayo dowlada Qatar waxaanu isticmaaleenaa wax walbo iyo albaab walbo oo inoo furan taas oo ay ku jirto inaan gabi ahaanba ka joojino gaaska aan siino wadamada khaliijka.
← KASHIFAAD: Tallaabadaan uu qaaday Diego Costa ayuu ka carooday Antonio Conte, waana midda soo afjartay mustaqbalkiisii Chelsea!
Manchester United oo isticmaashay wakiilka Jose Mourinho si ay ugu guuleysato heshiiska gooldhaliye jooga 100 milyan →